माथिल्लो तामाकोशीको कारोबार खुला, कति तोक्यो शेयर मूल्य ? - Dainikee News::
बुधबार, चैत्र १३, २०७५ |
माथिल्लो तामाकोशीको कारोबार खुला, कति तोक्यो शेयर मूल्य ?
काठमाडौं, पुस २९ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) माथिल्लो तामाकोशीको शेयर कारोबार आइतबार सुरु भएको छ । कम्पमीको UPPER सिम्बलमा कारोबार सुरु भएको हो । सुरुवाती कारोबारको लागि नेप्सेले ७४ दशमलव ८९ देखि २२४ दशममलव ४७ रुपैयाँसम्मको रेन्ज तोकि दिएको छ । नेप्सेले सुरुवाती कारोबारको लागि कम्पनीको नेट वर्थको ३ गुणासम्मको मूल्य तोक्ने गरेको छ । बिहीबार तामाकोशीको १० करोड ५९ लाख साधार शेयर सूचिकृत भएको थियो ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारी (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कोषका बाहेक)लाई १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० कित्ता, ऋण दिने संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई ३० लाख ४९ हजार ९ सय २० कित्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६० कित्ता गरी कुल २ करोड ५४ लाख १६ हजार कित्ता शेयर विक्री गरेको थियो ।
यस कम्पनीले दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लाका स्थानीयलाई १ करोड ५ लाख ९० हजार र तेस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता शेयर विक्री गरेको हो । दोस्रो चरणमा स्थानीयलाई साउन १६ देखि भदौ २१ गतेसम्म शेयर जारी गरी कात्तिक १४ गते बाँडफाँट गरेको थियो । स्थानीयलाई बाँडफाँट गरेको भोलिपल्ट कात्तिक १५ देखि १९ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी मङ्सिर ११ गते बाँडफाँट गरको थियो । तीनै चरणमा वितरित शेयर सूचीकरण भए पनि आयोजना प्रभावित स्थानीयले भने आगामी ३ वर्षपछि मात्र कारोबार गर्न पाउनेछन् । स्थानीयका लागि जारी गरिएको शेयरको कुलिङ पिरियड ३ वर्ष रहेको छ ।
आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय बासिन्दाको साथ र सहयोगका कारण यसै वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनाको निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको बताए । ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको कम्पनीले आगामी ३ वर्ष्भित्र लाभांश दिने समेत उनले घोषणा गरेका छन् ।
यस कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सहित नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोष संस्थापक शेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीको निर्माणाधिन ४ सय ५६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना तामाकोशी नदीमा अवस्थित छ । ६ वर्षे निर्माण अवधि रहेको यस आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज सहितको लागत ६९ अर्ब ५९ करोड १९ लाख १२ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि २०६५ चैत ७ गते सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज सहितको कुल लागत अनुमान ४८ अर्ब ८६ करोड ४० लाख थियो । भूकम्पले आयोजनाका केही भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने अनुमान कम्पनीको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, पुस २९, २०७५ /Sunday, January 13th, 2019, 10:53 am
एकताले मात्र काङ्ग्रेसको जीतः महामन्त्री कोइराला
युवालाई स्वरोजगार बनाउन ऋण प्रवाहलाई सरलीकृत बनाइने
देशका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा
झण्डै १० महिनापछि खुल्ने भयो मलेसिया रोजगारी
राप्रपा अध्यक्ष थापाले मनोनयन गरे पदाधिकारी
अनियमितता रोक्न सहकारीमा विद्युतिय प्रणाली
गोरखामा बस दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल अमेरिका प्रस्थान
माध्यमिक तहको अन्तिम नतिजा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सार्वजनिक (सूचिसहित)
आधारभूत तहको प्रअ हुन स्नातकोत्तर र माध्यमिक तहको प्रअ हुन एमफिल अनिवार्य
माध्यमिक तहको सामाजिक विषयको अन्तिम नतिजा आयोगद्वारा सार्वजनिक (सूचिसहित)
माध्यमिक तहको अंग्रेजी विषयको अन्तिम नतिजा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सार्वजनिक (सूचिसहित)
माध्यमिक तहको नेपाली विषयको अन्तिम नतिजा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सार्वजनिक (सूचिसहित)
माध्यमिक तहको विज्ञान विषयको नतिजा सार्वजनिक (सूचिसहित)
माध्यमिक तहको गणित र नेपाली विषयको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक (सूचिसहित)
घट्न थाल्यो कर्जाको व्याजदर